Intengiso yezeMpawu | Iphepha 2 lama-256 Martech Zone
Kule minyaka imbalwa idlulileyo ibinomdla kakhulu koosomashishini okanye iinkampani ezijonge ukwakha ishishini le-ecommerce. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ukumilisela iqonga le-ecommerce, ukudibanisa ukuhlawulwa kwentlawulo, ukubala iirhafu zalapha ekhaya, zikarhulumente kunye nezesizwe, ukwakha ukuthengisa okuzenzekelayo, ukudibanisa umnikezeli weenqanawa, kunye nokuzisa iqonga lakho lokuhambisa imveliso ukusuka kwintengiso ukuya kunikezelo kuthathe iinyanga kunye namakhulu amawaka eedola. Ngoku, ukwazisa indawo kwi-ecommerce
NgoLwesithathu, Meyi 19, 2021 NgoLwesithathu, Meyi 19, 2021 Douglas Karr
Sabelana kancinci malunga nokufunyanwa kodwa akonelanga malunga nokugcinwa kwabathengi. Iindlela zokuthengisa ezinkulu azikho lula njengokuqhuba ngakumbi nangakumbi, kukwakuqhuba ngokukhokelela ekunene. Ukugcina abathengi kuhlala kuyinto encinci yeendleko zokufumana ezintsha. Ngobhubhane, iinkampani zazizingela kwaye zazingenaburhalarhume ekufumaneni iimveliso kunye neenkonzo ezintsha. Ukongeza, iintlanganiso zentengiso yomntu kunye neenkomfa zentengiso zithintele kakhulu iindlela zokufumana kwiinkampani ezininzi.
2Ukujonga: Yenza isikali sokuHlawulwa kweNtlawulo yakho kwiHlabathi liphela ukuze wandise iRhafu
NgoLwesithathu, Meyi 5, 2021 NgoLwesithathu, Meyi 5, 2021 Douglas Karr
Ukuba awuzange ube nethuba lokudibanisa isisombululo sokuqhubekeka kwentlawulo, ukulungele amava okufunda. Iiprosesa zokuhlawula zinoluhlu lweempawu kunye nokunikezelwa… ukusuka kwimirhumo, ukuba zibhatalwa ixesha elingakanani, ukuya kumava okuphuma komsebenzisi, inkxaso yehlabathi, ukuthintela ubuqhetseba, kunye nomgangatho wezixhobo zakho zokubeka iliso kwingeniso. I-2Checkout yinkonzo yentlawulo esekwe kwilifu eyonyusa ukuguqulwa kwintengiso ekwi-Intanethi ngokubonelela ngeentlawulo zehlabathi kunye nezasekhaya
Xa abayili bemizobo kunye nabafoti bekhupha imifanekiso yabo yokugqibela, ngokwesiqhelo abalungiselelwanga ukunciphisa ubungakanani befayile. Ukucinezelwa komfanekiso kunokunciphisa kakhulu ubungakanani befayile yomfanekiso- nokuba yi-90 %- ngaphandle kokunciphisa umgangatho kwiliso lenyama. Ukunciphisa ubungakanani befayile yomfanekiso kunokuba neenzuzo ezimbalwa: Ukukhawuleza kweMithwalo yamaXesha ngokukhawuleza - ukulayisha iphepha ngokukhawuleza kuye kwaziwa ukubonelela ngamava aphezulu kubasebenzisi bakho apho bengenakuze
NgoLwesibini, Aprili 6, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 9, 2021 UStephanie Sperry
Ngolwazi kunye netekhnoloji ezandleni zethu, uhambo lokuthenga lutshintshe kakhulu. Abathengi ngoku benza uphando lwabo kwakude kudala ngaphambi kokuba bathethe nommeli wentengiso, oko kuthetha ukuba ukuthengisa kudlala indima enkulu kunakuqala. Funda ngakumbi ngokubaluleka "kokubetha" kwishishini lakho kwaye nokuba kutheni kufuneka ulungelelanise ukuthengisa kwakho kunye namaqela entengiso. Yintoni 'ukubetha'? Ukumaketha kudibanisa amandla akho okuthengisa kunye namaqela entengiso. Ijolise kulungelelwaniso lweenjongo kunye nemisebenzi